Root လုပ်နည်းများ : Myanmar Mobile Software Developer
Category: Root လုပ်နည်းများ
Zenfone Root Apk !
September 1, 2014 |2Replies
အခုနောက်ပိုင်း အသစ်ဝင်လာတဲ့ ” Asus Zenfone ” ဆိုပြီးလာပါတယ် အာ့ကောင်လေးတွေအတွက် လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ အမြစ်တူးပေးနိုင်မယ့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးတင်ပေးချင်ပါတယ် နာမည်လေးကတော့ ” Zenfone Root ” တဲ့ ကျွန်တော် စမ်းသပ်ပြီးတာကတော့ ” Zenfone5” နဲ့” Zenfone6” က လုံးဝ အဆင်ပြေပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့် အားလုံးလည်း လိုအပ်မယ်လို့ ထင်လို့ ပြန်လည် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ……… Download ( Zenfone Root Apk ! ) Mediafire Link […]
CWM Root For GT-I9506 (4.3 ) !
August 31, 2014 | 1 Reply
ကဲ…. Galaxy S4 Black Edition လို့ ခေါ်နေတဲ့ GT-I9506 လေးကို CWM တင်ပြီးအမြစ်တူးတာလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကောင်လေးကတော့ Beta လေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက် External Memory မသိသေးပါဘူး ဒါပေမယ့် Internal Memory အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ…….. ဒေါင်းလိုက်ပါအုန်း……. Download ( CWM Root For GT-I9506 Zip ) Mediafire Link အရင်ဆုံးလိုအပ်ချက်အနေနဲ့ ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ကောင်ကိုဖြည်လိုက်ပါ Root E330s I9506_v2.zip ကိုဖုန်း Internal ထဲထည့်ပြီး အလုပ်လုပ်ယုံပါပဲ ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် […]
August 28, 2014 | 1 Reply
” Sony ” သမားတွေ အကြိုက်တွေ့ စေမယ့် အမြစ်တူးတဲ့ Bat File လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကောင်လေးကတော့ Bootloader Lock / Unlock State မှာ မိမိတို့ ရဲ့” Xperia Devices ” တွေကို အဆင်ပြေစွာအမြစ်တူးပေးမှာပါ ကျွန်တော်ကတော့ လက်တွေ့M2 D2303 Single ကို အမြစ်တူးပြီးပါပြီ Support ပေးတဲ့ Model တွေကလည်း အများကြီးပါဝင်ပါတယ် ဥပမာ အသစ်ထွက်တဲ့ Xperia T3 အပါအ၀င်ပေါ့ဗျာ ဒီလောက်ညွှန်းနေရင်တော့ သဘောပေါက်နော်…. ကျန်တာတွေကတော့ ကျွန်တော်လည်း မစမ်းရသေးပါဘူး […]
G730-U00 Build Number နောက်ဆုံး 151 Root & Myanmar Font & Keyboard သွင်းနည်း
August 12, 2014 |2Replies
G730-U00 Build Number နောက်ဆုံး 151 Vroot မတိုးသူများအတွက် Myanmar,Root,Keyboard တစ်ခါထဲထည့်သွင်းပေးမည့် Boot Img လေး လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အစကတော့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ အချို့က အဆင်မပြေကျပါလို့ပါ။ ဒါလေးကို SP Flash Tool ကနေ သွင်းလိုက်ရင်ရပါပြီ။ သွင်းပြီးလို့ ဖုန်းပြန်တက်လာလာခြင်း မြန်မာစာတွေလွဲနေရင် ရိုးရိုး Restart ချပေးပါ။ Boot Img ကို ဒီမှာဒေါင်းပါ။ http://d-h.st/Tit SP Flash Tool ကို ဒီမှာဒေါင်းပါ။ http://d-h.st/RVp
CWM Root For GT-N7100 ( 4.4.2 ) !
July 19, 2014 | 1 Reply
ကဲ….. “Samsung ” User တွေအတွက် Galaxy Note2Kitkat Version အမြစ်တူးတာလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ဒီတခါတင်ပေးမှာကတော့ CWM Recovery လေးပဲဖြစ်ပါတယ် အသုံးပြုနည်းကိုတော့ သိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် ထပ်မပြောတော့ဘူးနော် အားလုံး ဒေါင်းလိုက်ပါအုန်းဗျာ……… Download ( Odin ) Download ( Phil touch Recovery tar.rar ) ပြီးရင်တော့ မိမိတို့ ဖုန်းကို CWM လေးတင်ပြီးဖောက်ယုံပဲနော် အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ…… [email protected] Read More
Root S3 Neo GT-I9300i ( 4.3 ) !
July 17, 2014 | 1 Reply
ကဲ………ဒီတခါတော့ ” S3 Neo ” အမြစ်တူးတာလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…….. ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးမှတင်ပေးတာပါနော်…….. လိုအပ်တာလေးဒေါင်းလိုက်ပါအုန်းဗျာ…… Download (Odin ) Mediafire Link Download ( CWM Root 4.3 Zip ) Mediafire Link Download ( GT-I9300i CWM Recovery Tar ) Mediafire Link ကဲ…ဒေါင်းလို့ ပြီးပြီဆိုရင်တော့ မိမိတို့SD Card ထဲကို CWM Root Zip ဖိုင်လေးကိုထည့်ထားပါ ပြီးရင် ဖုန်းကို Download Mode ခေါ်ပြီး […]
Root LG G Flex [D950|D955|D958|D959|F340|LS995] !
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ” LG ” Brand တွေရဲ့အမြစ်တူးနည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ ” LG Gflex ” ကိုစမ်းသပ်ပြီးမှတင်ပေးတာပါဗျာ……. သူပေးတဲ့မော်ဒယ်တွေကတော့ ကြည့်လိုက်ပါအုန်းဗျာ…….. LG Optimus G – All LG G2: D800 (ATT) – All D801 (TMO) – All 4.2.2 // No 4.4.2 support, (CLR/VTR) – All 4.2.2 // 4.4.2 ??), (WND) – All D802/T – All D803 – […]
Nokia XL Android Phone Install TWRP !
June 21, 2014 |5Replies
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ” Nokia Android ” ဖုန်းတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် TWRP လေးတင်ပေးချင်ပါတယ် နောက်ပိုင်း ” Nokia Android ” ဖုန်းတွေကို One Click Root တွေနဲ့ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး ဒါကြောင့် ဒီကောင်လေးတင်ပေးလိုက်တာပါ သွင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးနော် ဖုန်းကို Battery ဖြုတ် ပြန်တပ်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း Recovery mode Key ခေါ်ပြီး Super Su zip ဖိုင်လေးသွင်းယုံပဲနော် One Click နဲ့ အဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော် ပြုပြင်ကလိထားပေးထားပေးပါတယ်ဗျာ ကြည့်လိုက်ပါအုန်းဗျာ….. […]
Xperia SP 4.3 Kernel Root !
ကဲ…… Sony Xperia ရဲ့SP ဖုန်းလေးကို အမြစ်တူးတာလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Requirement – Bootloader unlock ဖြစ်နေရပါမယ် – Build Number မတူတာအလုပ်လုပ်ချင်မှ လုပ်မှာပါ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်စမ်းသပ်ထားတာကတော့ 12.1.A.0.266 ကိုစမ်းသပ်ထားတာပါ အားလုံးပြည့်စုံပြီဆိုဒေါင်းလိုက်ပါအုန်းဗျာ……… Download ( Xperia SP kernel Root.zip ) ပြီးပြီဆိုရင် မိမိတို့ ဖုန်းကို Fastboot mode ကနေ kernel file ကို flash ရပါမယ် ရိုက်ရမယ့် စာသားကတော့ fastboot flash boot kernel.elf […]
Xperia Z2 Table SGP-521(3G+WiFi) Version 4.4.2 Root !
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Xperia Z2 Tablet 3G+Wifi အမြစ်တူးတာလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုအပ်ချက်များ – မိမိတို့Tablet ဟာ Bootloader Unlock ဖြစ်နေရပါမယ် ပြီးပြီဆိုရင် လိုအပ်ချက်က ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ကောင်လေးကို boot.img ဆိုပြီးပြောင်းပေးရပါမယ် ပြီးရင်တော့ Fastboot mode ကနေ fastboot flash boot boot.img ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ရင်ရပါပြီ အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ Super su zip ဖိုင်လေးကို CWM ကနေ flash လိုက်ရင်ရပါပြီဗျာ…. လိုအပ်သူများ ဒေါင်းပါဗျာ……….. Download ( Doomloard Kernel image […]